Ukholo olunamandla lokulwa nobuthathaka: Uluhlu luni?
Ukholo lukaThixo luhlala luhluke kwiintlobo ezimbini: ulwalamano oluqinileyo lukaThixo kunye nobuthakathaka bukaThixo. Nangona iindidi ezimbini kuphela, lo mbutho ulawula ukubonakalisa ububanzi obanzi obukhoyo phakathi kwabakholelwa kuThixo xa kuziwa kwizikhundla zabo ekukholeni koothixo.
Ukholo olungakholelwa kuThixo, ngamanye amaxesha luthiwa lukholo lukaThixo, luphela nje igama egameni elibanzi kunye nelona lilonke lokungakholelwa kuThixo: ukungakholelwa kwinthixo.
Umntu ongenamandla okukholelwa kuThixo ungomntu ongenanto kwaye ongenakho ukukholelwa ekubeni ukho nawuphi na oothixo - akukho, akukho ngaphantsi. Kwakhona ngamanye amaxesha kuthiwa i- agnostic atheismism ngenxa yokuba abaninzi abantu abazikholelwa ngokunyanisekileyo kwizithixo bahlala benjenjalo ngenxa yezizathu ze-agnostic.
Ukholo olungakholelwa kuThixo, ngamanye amaxesha lubhekiselwa ngokucacileyo ukuba ukholelwa kuThixo , luye linyathelo elide ngakumbi kwaye luquka ukukhanyela ubukho bokuba unkulunkulu omnye, ngokuqhelekileyo oothixo abaninzi, kwaye ngamanye amaxesha ubukho bokuba kukho nantoni na. Ngamanye amaxesha u-atheism oqinileyo ubizwa ngokuthi "i-gnostic atheismism" kuba abantu abathatha le ndawo bahlala befaka iingxelo zolwazi kuyo - oko kukuthi, bathi bazi ngendlela ethile ukuba oothixo abathile okanye ngokuqinisekileyo bonke oothixo abanakho okanye abanakho.
Ngenxa yokuba ibango lwazi libandakanyekile, ukuqina okungakholelwa kuThixo kunomthwalo wokuqala wobubungqina obungekhoyo ngenxa yokungakholelwa kuThixo. Naliphi na ixesha umntu uthi omnye unkulunkulu okanye naluphi na oothixo abanakho okanye abanakho, bayazibophelela ukuba baxhase amabango abo.
Le mfundiso encinci yokungakholelwa kuThixo idlalwa yinto eninzi (ukuphosakela) ukumela konke ukukholelwa kuThixo.
Ngenxa yokuba amandla kunye nobuthakathaka baka-atheism bavame ukubizwa ngokuthi "iintlobo" zokungakholelwa kuThixo, abanye abantu bahlakulela ingcamango ephosakeleyo yokuba le ndlela ihambelana "namahlelo" angakholelwa kuThixo, kungekhona amacawa obuKristu.
Oku kunceda inkolelo yenkolelo yokuba ukungakholelwa kuThixo inkolo okanye inkolelo yenkolelo. Oku kubi, ngokukodwa kuba ileyibhile "yeentlobo" ayilunganga ngokupheleleyo; Kunoko, isetyenziswe nje ngenxa yokungabikho kwesigama esiphezulu.
Ukubabiza iintlobo ezahlukileyo kukuthabatha kwinqanaba elalihlukileyo - umntu unokuthi ukholelwa kuThixo okanye umntu ongakholelwa kuThixo. Nangona sijonge ngakumbi, kunjalo, siya kuqaphela ukuba phantse bonke abangakholelwa kuThixo bobabini kumanqanaba athile. Isalathiso esiyinhloko salo sinokubonwa kukuba inkcazo yokungakholelwa ku-atheism, engakholelwa ekubeni kukho nawuphi na oothixo, ngokwenene inengcaciso eyisiseko yokungafani noThixo ngokwawo .
Oko kuthetha ukuthini ukuba bonke abangakholelwa kuThixo bayabuthathaka. Umahluko, ngoko, phakathi kobuthakathaka nobuthixo obungathandekiyo kukuba abantu abathile bangabanye esikhundleni saloo nto, kodwa kunokuba abanye abantu bangabomnye ngaphezu kokunye. Bonke abangakholelwa kuThixo bayabuthakathaka kuThixo ngenxa yokuba bonke abangakholelwa kuThixo, ngokucacileyo, abanakho ukukholelwa ekubeni kukho oothixo. Kodwa abanye abangakholelwa kuThixo, nangona kunjalo, banamandla angakholelwa kuThixo kuba bathabatha inyathelo elongezelelweyo lokukhanyela ukuba kukho ubuncinane abanye oothixo.
Ngokwenene, besithi "abanye" abangakholelwa kuThixo abakwenzayo oku akunjalo ngokupheleleyo.
Uninzi, ukuba ayingabo bonke, abangakholelwa kuThixo banqwenela ukukhanyela ukuba kukho oothixo xa bebuzwa - bambalwa "ukungabi nokholelwa" ekukholweni kukaZeus okanye uApollo, umzekelo. Ngaloo ndlela, ngelixa bonke abangakholelwa kuThixo bangabuthathaka kuThixo, baninzi abantu abangakholelwa kuThixo banokuthi bangakholelwa kuThixo ngaphandle koothixo abathile.
Ngaba ngaba kukho nayiphi na ixabiso kuwo onke amagama? Ewe-leyo ibhalwa ngumntu uya kukuxelela okuthile malunga nokuthambekela kwabo ngokubanzi xa kuvela iingxoxo malunga noothixo. Umntu osebenzisa iilebula "ongakholelwa kuThixo" unokugatya ubukho babantu abathile, kodwa njengomgaqo oqhelekileyo akayi kuthatha inyathelo lokuqinisekisa ukuba akukho nkulunkulu othize. Kunoko, banako ukulinda i-theist ukuba benze iimeko zabo baze bahlolisise nokuba loo meko inokuthenjwa okanye ayikho.
Ngaphandle kolunye uhlangothi, umntu ongakholelwa kuThixo, unokuba ngumntu ongenamandla okukholelwa kuThixo, kodwa ngokufumana loo ileyibhile loo mntu uvelisa ukuzimisela kunye nomdla wokuthatha inxaxheba ebalulekileyo kwimibhikano yenkolo.
Basenokuba banokuthi bangene phambili phambi kokuba unkulunkulu othize akakwazi okanye akakwazi ukuba khona kwaye enze ityala kuloo, nangona ukuba i-theist ayenzi nto eninzi ukukhusela isikhundla senkolelo.
Inkolo ngokubhekiselele kwiNkcazo yobuNtu: Yintoni eyahlukileyo?
I-New Living Translation (NLT)
Isingeniso kwiZiseko zeGeology
Iziganeko Zomculo Ngexesha Eliqhelekileyo
Ngaba Ufanele Uhlawule NgeeNkonzo ze-Spellcasting Services?
I-University of Portland State GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ukunika izenzi ngeeNgesi zoLwimi lwabafundi
I-Classic Chevy Trucks: 1918 - 1959
KwiBritish Inventions AZ
I-Net Run Rate (NRR)
Udliwano-ndlebe kunye no-Queen of "300" - nguLena Headey
AbaLawuli abaziwayo beXesha le-19
Top 20 Billy Joel Iingoma